Install Bluetooth Adapter on Windows | BLOG OS-DUKAANKA
June 17, 2019 ecommerce 3G & kaarka wireless, Electronics, Networks, OS-DUKAANKA, Taageerada OSGEAR, Products, Technology 0
Laptops ayaa had iyo jeer uma aan imanin inaan Bluetooth-diyaar. Computers aan dhisay-in awoodaha Bluetooth qalabka wireless Bluetooth dhexgalaan iyadoo la kaashanayo aqbalana yar oo daboolaya galay dekedda USB ah oo ku saabsan computer ah.
rakibaadda automatic >>>
The wadayaasha ah ee USB Bluetooth adabtarada soo baxdo inta lagu guda jiro rakibi rakibo. Haddii aadan arkin degdeg ah oo aad ku rakibidda markii ugu horeysay, fadlan hubi wax kasta oo brannmur ama antivirus codsiyada naafada ah oo aan fara ama xannibaya rakibo. mar kale in aad awood laga yaabaa in codsi brannmur ama antivirus ka dib marka la rakibo.
Rakibaadda Manual >>>
1. Manager Device Open by Boogaadin “Tababaraha qalab” in menu bilowga ama bilaabi screen.
2. Hel qalabka USB ku jira liiska Device Maareeyaha (caadi ahaan u qabo qaybta Qalabka Kale).
Note: Magaca qalabka iyo category sida hoos ku qoran kala duwanaan karaa.
3. Dhanka midig u guji on qalab iyo guji Software Driver Update…
4. In Software Update Darawalka, saaxir riix Browse my computer software darawalka.
5. Guji ha ii soo qaado liiska ka mid ah darawallada qalab on my computer.
6. Dooro Show All Devices oo guji Next. Riix Have digsi ku… button.
7. Click Browse iyo maraan si faylka darawalka ee tusaha rakibo. by default, meesha uu yahay: “C:\_barnaamijka Files (x86)…
8. Waxaad heli kartaa wada hadal Digniin Update Driver ah oo sheegaya in gacanta codsanaya darawalka waxay keeni kartaa qalabka si ay u joojiyaan shaqeeya. Click Haa si loo sii wado.
9. saaxir The codsan doonaa darawallada cusub oo ay soo sheegaan guusha. Guji Close si ay u dhamaystiraan saaxir ah.
Bluetooth daaqadaha darawalka XP >>>
1.Furaysto adabtarada Bluetooth galay computer ee dekedda USB
2. Wizard Rakibaadda Driver ayaa u muuqda. Raac tallaabooyinka hoose. Browse iyo dooran buugga meesha darawalka waxa uu ku yaalaa.
daaqadaha darawalka Bluetooth 8 >>>
1. bareesada ka Bluetooth adabtarada galay dekedda USB computer ee
2. Ku rakib darawal nidaamka
2.1 Nidaamka rakibi doonaa darawal ilaa rakibaadda darawalka waa guul
Riix Start -> Settings Computer -> Control Panel -> Qalabka iyo Daabacado. Eeg icon hoose, taas oo macnaheedu yahay waxa ay ku guulaysteen.
2.2 Haddii wadaha ku guuldareysto inuu si toos ah loo soo dajiyo
Riix Start -> Settings Computer -> Control Panel -> Qalabka iyo Daabacado iyo arko icon hoose
Double click on qalabka oo aan la garaneyn, dooro: hardware, click: guryaha
Dooro: Driver, click: update Driver
Dooro: Browse your computer ah software darawalka
Browse, dooro folder meesha darawalka waxa uu ku yaalaa, oo guji: Next
Waxaa buuxiya rakibo 'Finish’ >>>
Click ah “Finish” button marka la rakibo ayaa dhameystirtay. Guuleysatey computer haddii dhalisay. A icon Bluetooth u muuqataa in meesha wargelinta ah ee desktop-ka ku yaala geeska hoose ee bidix ee shaashadda ah. xirnaanta Bluetooth waxaa hadda awood aad laptop.
Xuquuqda-riix “Bluetooth” astaan ​​wax dooro ikhtiyaarka si xubnuhu qalab kale Bluetooth-karti, sahamiyaan isku xirka Bluetooth heli karaa, reserved adabtarada ama joojin qalab Bluetooth ah.
More Tech-macluumaad, Riix Halkan
Graphics HD Technology_Internet 64-Windows yara Tababaraha qalab Software Nokia Telefoonka gacanta processor Model Device OS-DUKAANKA processor Processor Taageerada Driver Taxanaha Technology Samsung HTC Intel taageero darawalka Ujeeddo Dadweynaha fasiraad sharci ah
OS-DUKAANKA HTC processor Processor processor Server Intel Intel taageero darawalka Technology Sony Ericsson Technology_Internet Nokia Model Device Qualcomm casriga ah Ujeeddo Dadweynaha Taageerada Driver Taxanaha Samsung Galaxy Samsung Software Telefoonka gacanta Tababaraha qalab fasiraad sharci ah Graphics HD 64-Windows yara